Antony 5 mahatonga ny vadinao ho tezitra na tezitra aminao foana - Fifandraisana
Antony 5 mahatonga ny vadinao ho tezitra na tezitra aminao foana
Mety misy antony maro ao ambadiky ny fahatezeran'ny vadinao tsy tapaka, ary hizaha izay mety ho izy ireo sy ny fomba fiaraha-miasa izahay hamahana azy ireo, raha zavatra tianao hiasa izany.
Zava-dehibe tokoa ny manamarika fa, satria mety misy antony marim-pototra ao ambadiky ny fihetsiny, dia tsy mitombina izy ireo ary mbola mila mandray andraikitra amin'ny fitondran-tenany izy.
Tsy hoe satria misy antony izany dia tsy midika hoe mila miaritra amin'izany ianao.
Raha misy fiatraikany eo aminao ny fihetsika ataony na mahatonga anao hahatsapa ho tsy azo antoka, dia misy toerana azonao ialana fanampiana bebe kokoa.
Tsy tokony hijanona amin'ny olona izay mahatonga anao hahatsapa ho tsy azo antoka ianao, na inona na inona antony ao ambadiky ny asany.
Fa raha ny fahatezeran'ny vadinao dia zavatra tianao tadiavina, misy fomba fanandramana.
Tadidio fa tompon'andraikitra izy ary efa olon-dehibe, ary ianareo afaka mangataka ny fiaraha-miasa aminy amin'ny fanatsarana ny tenany.
Maro amin'ireo antony mahatonga ny fahatezerany no ho avy aminy ary tena tsy azo inoana mihitsy ny ho vokatr'izany aminao!
Ny ankamaroan'ny fihetsem-pontsika dia avy amin'ny tenantsika sy ny vinavinantsika ireo fahatsapana ireo sy ny fahitantsika ny tontolo manodidina antsika, koa aza manome tsiny ny tenanao.
Ireto misy antony mety mahatonga azy sahirana, ary sosokevitra vitsivitsy momba ny fomba hiaraha-mandroso.
1. Manana olana tsy voavaha izy.
Misy ny antony anontanian'ny stereotype an'ireo mpitsabo momba ny fahazazanao…
Ny ankamaroan'ny fihetsika ataontsika rehefa olon-dehibe dia avy amin'ny zavatra niainantsika tamin'ny fahazazantsika.
Ny hatezerana amin'ny olona rehetra dia mety hipoitra amina olana marobe mandritra ny fahazazanao.
Angamba tsy voatsabo tsara ny vadinao tamin'ny mbola kely.
Angamba tsy maintsy niady izy mba handrenesana ny tenany ao an-trano be olona iray, ka izay no mahatonga azy mihiaka ankehitriny. Miezaka ny hampita ny heviny izy ary efa zatra mila mafy be vao afaka manao izany!
Mety ho ny fomba tokana hisarihana ny saina amin'ny maha-zaza azy dia ny fanaovany fihetsiketsehana.
Ny ankizy manana fitondran-tena tsara indraindray dia mety tsy ho jerena, ary ireo maditra dia omena fiheverana bebe kokoa (na dia tsy dia jerena loatra).
Mety nahatsapa an'io ny vadinao fony izy mbola tanora, ary ankehitriny dia mahatsapa fa ny famonoana olona dia fomba iray hisarihana ny sainao - ary angamba ny fitiavanao azy aza.
Ahoana ny fomba hiatrehana izany: mety hahatsapa fa tsy ho vita izany rehefa ratsy toetra ny vadinao, fa ny mifampiresaka sy misokatra no tena ilaina.
Rehefa somary milamina kokoa ny raharaha dia azonao atao ny manontany ny momba ny fahazazany na manoro hevitra moramora azy ho tezitra toy ny fahazarana.
Tandremo ny fomba fiteninao an'io karazan-javatra io satria tsy te-hanafintohina azy ianao na hametraka azy irery ny tsiny rehefa mahatsapa ho marefo izy ary manokatra anao.
Tsy midika akory izany fa tokony handray ny tsiny ianao, fa kosa tokony hiezaka ny hanana fisainana malalaka rehefa miresaka olana taloha izy.
Tadidio fa olombelona ihany izy! Mety nanana fotoan-tsarotra marina tamin'ny fahazazany izy, ary mety tsy nahazo fitsaboana na fahatsiarovan-tena na nanana olona niresaka hikirakira ireo fahatsapana ireo, ka izany no mahatonga ny fiatraikany ankehitriny.
Ny fanohanana mandritra ity vanim-potoana misaintsaina ity dia tsy vitan'ny hoe hanampy ny vadinao hahita sy hiatrika ny olany fotsiny, fa hampanakaiky anao roa tonta.
Io koa dia hanampy azy hahita anao ho olona 'azo antoka' sy olona tsy mila tezitra.
Toa tsy dia toy ny ‘fandrahonana’ na fampahatsiahivana ny fiainany taloha mahasosotra ianao.
2. Niteraka fahatezerana ny toe-javatra manokana.
Ity dia zavatra tokony hotadidintsika ao an-tsaina amin'ny rehetra, ka azo antoka fa mihatra amin'ny lehilahy tezitra izany!
Indraindray, ny olona dia manana andro ratsy fotsiny.
Ireo andro ratsy ireo dia mety hivadika herinandro na volana ratsy.
Matetika ireo zavatra izay ivelan'ny fifehezana antsika nefa misy fiantraikany sy mahasosotra antsika.
Mety ho sahirana be any am-piasana izy, na mety hahatsiaro ho nampijalian'ny lehibeny.
Mety nifamaly tamin'ny namana na mpianakavy iray izay mbola mavesatra ao an-tsainy izy.
Mety ho sahirana izy amin'ireo zavatra marobe sahirana ataon'ny hafa rehetra!
Ahoana ny fomba hiatrehana izany: zava-dehibe ny mihemotra ary manandrana mahita ny sary lehibe kokoa.
Tsy voatery ho tezitra aminao izy dia tezitra amin'ireo lafin-javatra ivelany amin'ny fiainany izay tsy voafehiny.
izay nandresy tamin'ny fidorohana mpanjaka 2016
Averina indray, tsy milaza aminao izahay mba handray ny andraikiny amin'ny zavatra nataony, fa mety tena manampy anao handinika ny toe-javatra teo amin'ny fiainany izany.
Raha mahatsapa ianao fa ny fahatezerany dia mitodika aminao, na noho ianao, dia mety hamaly amin'ny fomba fiarovan-tena ianao.
Na dia ara-dalàna tanteraka aza izany dia mety handrehitra afo izany ary hiteraka adihevitra marobe / ratsy kokoa.
Raha afaka mihemotra ianao ary mahatsapa fa tsy momba anao izany, dia tsy ho mpiaro tena ianao ary tsy hanana na inona na inona ‘miady’ izy, midika izany fa hiparitaka haingana sy milamina kokoa ny fifamaliana.
3. Manana fahatokisan-tena ambany izy.
Averiko indray, ny vadinao dia olombelona hafa manandrana mitety fiainana!
Mora ny mijanona tsy mahita ny sakaizanao ho olon-kafa indraindray, ary, amin'ny maha vehivavy antsika dia hadinontsika matetika fa ny lehilahy dia miaina fihetsem-po mitovy amintsika.
Nolazain'ny haino aman-jery izahay fa be fientanam-po kokoa ny vehivavy ary 'miroso amin'izany fotsiny ny lehilahy.'
Izany dia manasarotra ny mahatadidy fa miady amin'ny zavatra toa ny fahatokisan-tena ihany koa izy ireo, manahy ny amin'ny endrik'izy ireo sy ny fisakaizany toa antsika koa izy ireo.
Firy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra maneho ny vehivavy mitomany ny vatany na ny sakafony? Tsara tarehy daholo.
Firy no mampiseho lehilahy manao an'izany? Marina indrindra.
Adinontsika fa miaina olana mitovy amintsika izy ireo, ary ireo olana ireo matetika dia mety hiteraka fipoahan'ny hatezerana.
Ahoana ny fomba hiatrehana izany: raha mora sosotra sy tezitra foana ny vadinao dia mety noho ny fahatokisanao tena izany.
Mety manana fotoan-tsarotra izy ary mahatsiaro tena ho tsy manana tena-tena. Mety hampahatezitra ny olona rehetra izany.
Araka ny voalaza tetsy ambony, ny fampitam-baovao sy ny fialamboly dia mahalana no mampiseho ireo zavatra niainany tamin'ny lehilahy ireo, ka mety ho sarotra aminy ny mamantatra izay tena tsapany.
Mety tsy mahazo aina izy miresaka an'ireo karazana olana ireo amin'ny namany, toy izany koa ny fiatrehana azy ireo irery.
Rehefa mahatsapa ho ratsy amin'ny vatanao ianao, ohatra, dia mila manokatra Instagram fotsiny ianao vao mahita vehivavy mitanjaka tsy mitanjaka izay manome aingam-panahy anao, na miantso namana ianao ary mizara ny zavatra tsapanao.
Lehilahy maro no tsy mahazo aina rehefa manao izany karazana zavatra izany, ka mahatsiaro tena ho mitokana amin'ny zavatra iainan'izy ireo ambany, noho izany dia maneho fahatezerana izy.
Miezaha maneho fangorahana amin'ny vadinao. Ampahatsiahivo azy fa tianao izy ary hitanao fa manintona izy.
Rehefa mandeha ny fotoana dia tokony hanampy amin'ny fitomboan'ny fahatokisany tena sy hanamaivanana ny hatezerany izany.
Nanjary lalina kokoa ity lahatsoratra ity: Zavatra 5 tokony hatao raha toa ka ambany ny tombam-bidin'ilay lehilahy tianao (+ Famantarana 6 hitadiavana)
4. Manana tebiteby sy / na aretin-tsaina izy.
Toy ny voalaza etsy ambony, tsy dia matetika isika no mahita lehilahy miaina olana ara-pahasalamana ara-tsaina - fa izany tokoa!
Ny zavatra toy ny fisaintsainana sy ny fahatsiarovan-tena dia matetika no hita ho 'vehivavy' na 'hippy' (izay misy ifandraisany amin'ny vehivavy kokoa noho ny lehilahy noho ny antony!), Ary, toy izany, betsaka ny lehilahy no manilika azy ireo ho fitaovana mitombina.
Mety ho ny fahatezeran'ny namanao tsy tapaka dia avy amin'ny toerana misy fihenjanana sy fanahiana.
Izy ireo dia mety ho toa milamina tsara indraindray, na tsy voan'ny adin-tsaina ary afaka compartalisation sy miala sasatra mora foana, fa tsy midika akory izany fa tsy mitolona.
Ahoana ny fomba hiatrehana izany: raha tezitra aminao foana ny vadinao dia mety hoe mitebiteby be izy.
Tsy eo foana ny fihetseham-po amin'ny maha izy azy…
Ny tahotra dia tsy midika hoe misy manery eo an-joron-trano iray, mety hidika izany hoe te hifehy ny zava-drehetra izy ireo ary ho sosotra be.
Ny famoizam-po dia tsy midika hoe misy mitomany be dia mety hidika hoe mihorakoraka kokoa izy ireo.
Avereno indray, andramo ny sasany amin'ny resaka misokatra tena hahalalanao raha olana sedrain'ny namanao izany.
Mety hanampy anao izany raha misokatra sy maneho ny alahelonao manokana ianao.
Ny famelana ny mpiambina anao sy ho marefo dia manaisotra ny tahotra izay matetika miteraka fanahiana, izay, avy eo, dia afaka manamaivana ny fahatezerana manodidina azy.
Mety ho tezitra foana ny vadinao satria fantany fa tianao izy ary tsapany fa toerana ‘azo antoka’ hamoahana ireo marefo ireo, na dia miseho ho fahatezerana aza izy ireo fa tsy mety ho araka ny eritreretinao ny tahotra azy.
Asehoy ny fanohananao, ataovy izay azonao atao mba hanampiana, ary ho hitanao ny fiovana sasany amin'ny fihetsiny.
5. Manana olana amin'ny fifehezana izy.
Averina indray, fanalahidy ny manamarika fa, na dia toa nanosika anao na ny nataonao aza ny fihetsiny, dia tsy ianao no diso.
Betsaka ny olona miady amin'ny olana mifehy, ary mety hiteraka fahatezerana be izy ireo.
Mety ho sosotra izy rehefa tsy ‘toy izany’ fotsiny ny raharaha, na hoe tiany ny zavatra vita araka ny fombany.
Mety hahatonga anao hahatsapa fako io, fa andramo tadidio fa tsy taratry ny tenanao na ny fifandraisanao izany.
Izy no manana olana mila resahina, ary mety ho sarotra ny mahatakatra izany.
Mipoitra matetika ny hatezerana rehefa mahatsapa ho sosotra sy sosotra isika rehefa tsy mahafehy zavatra ary tsy afaka mamono ny fahatsapana ratsy.
Ny tsy fahaizana mifehy zavatra dia miharihary fa mahatonga antsika hahatsapa ho voafehy, izay mahatonga antsika hahatsapa ho tsy afa-manoatra sy tezitra.
Ahoana ny fomba hiatrehana izany: andramo mametraka ny tenanao amin'ny kirarony.
Raha mahatsiaro tsy voafehy ianao, dia ho sosotra.
Tsy misy olona tia zava-dratsy mitranga amin'izy ireo, ary ny tsy fahaizana mampiato ireo zavatra ireo dia mety hiteraka olana iray amin'ny fifehezana.
Averina indray, izany dia mety hiteraka olana maro ao anatin'ny olona avy eo izay miditra amin'ny fifandraisan'izy ireo.
Amin'ny fahafantarana izany dia ho afaka haneho fangoraham-po bebe kokoa amin'ny mpiara-miasa aminao ianao ary hisokatra bebe kokoa amin'ny fandraisana fepetra hanampiana azy ireo.
Mazava ho azy fa ny fitsaboana dia mety hanampy betsaka amin'ireo karazana olana ireo, saingy mety ho sosotra ny namanao raha manolo-kevitra an'io eo noho eo ianao!
Manolora moramora fomba azonao andramana manampy.
Tsy midika izany fa afaka mifehy tanteraka ny zava-drehetra izy ary tsy afaka manana ny fombanao manokana manao zavatra sasany.
Midika anefa izany fa azonao atao ny manandrana marimaritra iraisana momba ireo olana izay mahatonga azy hahatsapa ho tsy voafehy loatra.
Ka izany no antony 5 mahazatra mahatonga ny vadinao ho tezitra na sosotra aminao.
Mety toa tsy dia misy ifandraisany mivantana izy ireo, saingy, arakaraky ny hieritreretanao azy ireo no mahamarina azy ireo.
Miezaha ho tsara fanahy - samy manana ny olany ny tsirairay ary ny sasany amintsika dia ampy fitaovana kokoa hiatrehana azy ireo.
Raha tsy nanana fianakaviana mpanohana ny sakaizanao na tsy nanana namana akaiky na tsy mahazo miditra amin'ny rafitra mpanohana dia mazava ho azy fa mahatsiaro ho tototra izy ireo!
Tsy ny hanamarinana ny fitondran-tena ratsy nataon'izy ireo izany, fa hanazava ny antony isehoan'ny fahatezerana, ny adin-tsaina na ny tsy fananany vidim-tena ankehitriny ho fahatezerana.
Mety hahatsapa ho manirery be sy miahiahy momba ny fihetsem-pony izy, na mety tsy hahafantatra ny fomba hanehoana tsara ny fitaintainany, ary hitany fa mora kokoa ny mamoaka azy amin'ny alàlan'ny hatezerana sy ny kiakiaka.
Rehefa manisy fiovana lehibe eo amin'ny fiainana na ny fomba fisainanao dia manandrama mitazona fomba fijery kely.
Mety hahatsapa fa ratsy foana izy hatramin'izay na nahatsapa ho toy ny mandeha an-tongotra amin'ny atody.
Miezaha misaintsaina an'io - tena efa toy izany tokoa ve sa efa toy izany izao?
Tsy milaza izany ianao hoe tokony hanilika ny fahatsapanao fa ny manandrana manampy anao handanjalanja azy ireo fotsiny.
Raha olana tsy miova izany ary mahatsiaro tena ho mafy orina ianao, dia mieritrereta mba hangataka fanampiana matihanina, na ho anao ho fomba iray hiatrehana na ho mpivady hiasa amin'ny olany tsy voavaha.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao amin'ny vadinao tezitra na tezitra? Miresaha amin'ny Internet amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Heroes ho an'ny fifandraisana izay afaka manampy anao hamantatra ny zava-misy (na ianao irery na mpivady). Tsotra.
Ahoana ny fomba hifehezana sy hiatrehana ny hatezerana amin'ny fifandraisana: tsy misy toro-hevitra tsy misy fotony 7!
Fomba 6 hanatonana ny fiovan'ny toetran'ny vadinao
Raha heverinao fa mankahala anao ny vadinao dia ataovy izany
Antony 10 Manameloka anao amin'ny zavatra rehetra ny vadinao
Fomba tsotra 7 hahasambatra amin'ny fanambadiana tsy sambatra
Ahoana no fomba hiatrehana vady ratsy izay mitaraina amin'ny zava-drehetra
Ahoana no fomba hiatrehana ny vady izay mitondra anao toy ny zaza
Raha manambady sy manirery ianao dia izao no mila ataonao
Torohevitra 12 hiatrehana vady adin-tsaina ary hanampiana azy hiala sasatra
ahoana no ahafantarana raha mbola tiany ianao
ahoana no hahalalana raha tena misy bandy tia anao sa te hiara-matory aminao fotsiny
maninona aho no tsy miraharaha an'iza intsony
tsy manana namana any am-pianarana aho